Cueva de los Verdes - के हेर्ने, मूल्य, तालिका र अधिक धेरै Absolut यात्रा
La कुएवा डे लस भर्डेस हामी यसलाई पृथ्वीको केन्द्रको प्रवेशद्वारको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं। किनकि यो ज्वालामुखी संरचना वा गुफा हो, जसले यसलाई ठूलो पर्यटकीय आकर्षण बनाएको छ। त्यसैले यो अलि अलि जान्न र यसलाई लिने स्थानको रूपमा लेख्नुहोस् जुन हामीले हाम्रो जीवनमा कम्तिमा एक पटक भ्रमण गर्नुपर्दछ।
यदि तपाईं भित्र हुनुहुन्छ Lanzarote र अधिक विशेष रूपमा Haría मा, तपाईंसँग अब बहाना छैन। यो टापुको उत्तरमा अवस्थित छ र हामी भन्छौ कि तपाईले ज्वालामुखीको ट्यूबको रूपमा एउटा पार्थिव तस्बिर पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको भ्रमणको लागि आवश्यक सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ भने, के हुन्छ याद नगर्नुहोस्!
1 के हो र कसरी Cueva de लॉस Verdes गठन गरियो
2 गुफाको पहिलो प्रयोग र यसको नामको उत्पत्ति
3 क्युवा डे लस भर्डिसमा के हेर्ने
4 Shcedules र मूल्यहरु
5 La Cueva de los Verdes भ्रमण गर्दा ध्यानमा राख्नको लागि जानकारी
के हो र कसरी Cueva de लॉस Verdes गठन गरियो
जसरी हामी उन्नत भएका छौं, यो नजिक छ एक ग्रोटो वा एक प्रकारको ट्यूब त्यो पृथ्वीमा जान्छ। त्यसैले तपाईं यसको भित्रबाट आनन्द लिन सूर्यको प्रकाशलाई पछाडि छोड्नुहुनेछ। यो Cor००० वर्ष भन्दा पहिले गठन गरिएको थियो, ला कोरोना ज्वालामुखीको विस्फोटका कारण। जब तरल पदार्थ लाभासहरू त्यहाँ बग्थे जहाँ अरूहरू धेरै बढी कम्प्याक्ट थिए, यो वातावरण सिर्जना गरिएको थियो: ठूलो गुहा।
यस्तो गुहा त्यस्तो हुन्छ कि नतीजा लगभग kilometers किलोमिटर लामो छ। यसले ज्वालामुखीको त्यो भागलाई समेट्छ जुन हामीले समुद्री तट क्षेत्रमा पुग्न अघि नै उल्लेख गरेका थियौं। यो संसारमा सबैभन्दा लामो हो। यो तटीय क्षेत्रमा ठिकै छ जहाँ हामी पनि भेटिने मानिसहरूलाई भेट्दछौं जामेस डेल अगुआ। एक प्राकृतिक वातावरण तर एक जुन पर्यटन र संस्कृतिको क्षेत्र भएको छ।
गुफाको पहिलो प्रयोग र यसको नामको उत्पत्ति
यद्यपि अब हामी यो देखेर छक्क परेका छौं, धेरै वर्ष अघि अलि बढी त्यसैले यो जहिले पनि एक क्षेत्र भएको छ किंवदन्तीहरु तिनीहरू पछाडि छोडिएको छैन। तर ती बावजुद, यो सत्य हो कि यसको लुकाउने ठाउँको रूपमा यसको पहिलो प्रयोगहरू थिए। स्पष्ट रूपमा, त्यहाँका बासिन्दाहरूले तिनीहरूले प्राप्त गरेका आक्रमणहरूबाट लुक्ने अवसर गुमाएनन्। यो समुद्री डाकुहरू जो सँधै टापुमा उपस्थित थिए र त्यस्तै धेरै व्यक्तिहरू थिए जसले आफ्नो ज्यानको लागि डर राख्दछन्।
अर्कोतर्फ, यसले पनि हामीलाई सोच्न नेतृत्व गर्दछ उसको नामको उत्पत्ति। कुएवा डे लस भर्डेस एउटा परिवारको नाम लिन्छन्। किनकि तिनीहरू निर्माण गरिएको माटोका मालिकहरू थिए। त्यसकारण, परिवारको अन्तिम नाम बाँकी छ। त्यसबेला देखि यो सधैं सबैभन्दा धेरै प्रतीकात्मक ठाउँहरू मध्ये एक भएको छ, हामी देख्न सक्छौं।
क्युवा डे लस भर्डिसमा के हेर्ने
हामी पहिले नै यसको सुरुवाती, यसको नामको बारेमा थोरै सिक्दै छौं र अब यो यसमा देख्ने सबै कुराको पालो हो। S० र s० को दशकमा केहि ग्रट्टो भित्र सुधार प्रति से। उदाहरणको लागि, एक प्रकाश प्रणाली ताकि यो चरणको साथ, यो कुनै ठूलो समस्या बिना भ्रमण गर्न सकिन्छ। अवश्य पनि, सँधै एक गाईडको साथ जो हामीलाई प्रत्येक चरण व्याख्या गर्नेछ।
त्यहाँबाट एक अडिटोरियम सिर्जना गरिएको थियो, यसको स्ट्यान्ड र सुन्दरताले यसले संकेत गर्दछ। मञ्च र वरपरको भाग ढु stone्गाले ढाकिएको छ र यस क्षेत्रमा अझ अधिक तीव्रता थप्दछ। तर यो मात्र होइन तर यो धेरै कुनाहरू मिलेर बनेको छ जुन उनीहरू जस्तो हुन सक्छन् 'मृत्युको घाँटी' वा 'सौंदर्य कोठा'। यस ठाउँको औसत भ्रमण करीव 50० मिनेट लाग्छ, त्यसैले तिनीहरू यसको प्रत्येक कुनामा पत्ता लगाउन उत्तम हुनेछ।
यो जस्तो अधिक स्थानहरू जस्तै, हामी सधैं तालिका को एक श्रृंखला आदर र यस साहसिकमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनको लागि मूल्य तिर्नुहोस्। सत्य यो हो कि यो यसको लायक र धेरै छ। एक सभागार र बत्तीको उत्तराधिकारको रूपमा उनीहरूले गरेका प्रबन्धहरू बाहेक, यो ठाउँ छुटाउनु हुँदैन। तपाइँ कुन समयमा क्युवा डे लस भर्ड्सको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ? अक्टुबर १ देखि जून 30० सम्म, घण्टा १०:०० देखि १:10:०० सम्म हुनेछ। ग्रीष्म seasonतु जुन जुलाईको पहिलो दिन देखि सेप्टेम्बर 00० सम्म चल्छ, यसको समय १०: ०० देखि १ :18: ०० सम्म हुन्छ। वयस्कहरूले 00 .30० यूरो भुक्तानी गर्नेछन्, जबकि १२ बर्ष उमेरका बच्चाहरू, 10 यूरो। सबै ल्यानजारोटी बासिन्दाले केवल २ यूरो मात्र तिर्ने छन्।
La Cueva de los Verdes भ्रमण गर्दा ध्यानमा राख्नको लागि जानकारी
तपाईं सँधै एक गाईडको साथ जानुहुनेछ जसले तपाईंलाई मुख्य बुँदाहरू देखाउँदछ र तपाईंलाई सबै प्रकारका जानकारी बताउँदछ। अर्कोतर्फ, यो ध्यान दिनु पर्छ यो गतिशीलता कम भएका व्यक्तिको लागि उपयुक्त क्षेत्र होईन। किनकि यसमा सेक्सनहरू छन् र सीढीका साथ तल झर्ने कामहरू छन्, यद्यपि तिनीहरू साइनपोष्ट गरिएका छन् र ह्यान्ड्रेइलहरू सहित छन्। तर हामी अनौंठो क्षेत्रमा पुग्नेछौं जुन संकुचित छ र हामी मार्ग जारी राख्न तल मोड्नै पर्छ।
भित्र एक तापक्रम छ जुन एकदम सहज छ। यो राख्छ २०º को आसपास वर्षभरि, त्यसैले यो डाटाबाट अर्को हो जुन सधैं यो कुरा थाहा पाउन सहज हुन्छ कि हामी यस प्रकारको भ्रमण गर्दा। ओभरल्यापि levels स्तरहरूमा र colors्गहरूको संयोजनले तपाईंलाई याद गर्न सक्दैन भनेर अर्को शो हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कुएवा डे लस भर्डेस